Nhau - FAQ yekudzivirira kupokana tester
Iyo yekudzivirira kupokana tester yakakodzera kuyera kuramba kwekukosha kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvekudzivirira uye kuputira kwekudzivirira kweanoshandura, mota, tambo nemidziyo yemagetsi kuona kuti izvi zvishandiso, midziyo yemagetsi nemitsetse zvinoshanda munzvimbo yakajairika uye kudzivirira tsaona dzakadai sekuvhunduka kwemagetsi. kukuvara uye kukuvara kwemidziyo.
Zvinetso zvakajairika zvekudzivirira kupokana tester zvinotevera.
1. Kana uchiyera capacitive mutoro kuramba, ndeupi hukama pakati pekuburitsa pfupi-redhiyo yazvino yekudzivirira kuramba tester uye yakayerwa data, uye nei?
Iyo inoburitsa pfupi-redunhu razvino yeiyo yekuisa kuramba tester inogona kuratidza yemukati kuramba kweiyo yepamusoro-voltage sosi.
Vazhinji kuputira bvunzo zvinhu zvinhu zvine capacitive mitoro, senge tambo refu, mota nemamwe mamhepo, ma transformer, nezvimwewo. Naizvozvo, kana chakayerwa chinhu chiine capacitance, pakutanga kwekuyedza maitiro, iyo yakakwira voltage sosi mune yekudzivirira kuramba tester inofanira kuchaja iyo capacitor kuburikidza nekumira kwayo kwemukati, uye zvishoma nezvishoma inobhadharisa iyo voltage kune inobuda yakatarwa yakakwira voltage kukosha kweiyo yekudzivirira kuramba tester. Kana iyo capacitance kukosha kwechinhu chakayerwa chakakura, kana iko kupokana kwemukati kweiyo yepamusoro voltage sosi yakakura, iyo yekuchaja maitiro inotora nguva yakareba.
Kureba kwayo kunogona kutariswa nechigadzirwa cheR uye C mutoro (mumasekondi), kureva t = R * C mutoro.
Naizvozvo, panguva yekuyedzwa, iyo capacitive mutoro inoda kubhadhariswa kumagetsi ekuyedza, uye yekumhanyisa kumhanya DV / DT yakaenzana nechiyero chekuchaja ikozvino I uye mutoro capacitance C. Ndiko DV / dt = I / C.
Naizvozvo, kushomeka kwemukati kudiki ndiko, kukura kwazvino kuchaita, uye nekukurumidza uye nekugadzikana mhedzisiro yemuyedzo.
2. Chii chiri basa re "g" kupera kwechiridzwa? Mumamiriro ekuyedza emagetsi akakwirira uye nemhando yepamusoro, nei chiridzwa chakabatana ne "g" chinongedzo?
Iyo "g" yekupedzisira kwechiridzwa inodzivirira terminal, iyo inoshandiswa kubvisa kukanganisa kwehunyoro uye tsvina munzvimbo yekuyedza pamhedzisiro yekuyera. Iko "g" kumagumo kwechiridzwa kupfuudza iyezvino leakage pamusoro pechinhu chakaedzwa, kuitira kuti iyo yekudonha yazvino isapfuure nepakati pekuyedza wedunhu rechiridzwa, kubvisa iko kukanganisa kunokonzerwa neiyo leakage yazvino. Paunenge uchiyedza iyo yepamusoro kuramba kukosha, iyo G yekupedzisira inoda kushandiswa.
Kazhinji kutaura, iyo g-terminal inogona kutariswa kana iri pamusoro kupfuura 10g. Nekudaro, iyi yekumisikidza renji haina kukwana. Yakachena uye yakaoma, uye vhoriyamu yechinhu chinofanira kuyerwa idiki, saka inogona kugadzikana isina kuyera 500g pag-end; Munzvimbo yakanyorova uye yakasviba, yakaderera kuramba inodawo g terminal. Kunyanya, kana zvikawanikwa kuti mhedzisiro yacho yakaoma kuti igadzikane kana ichiyera kupikisa kwakanyanya, iyo g-terminal inogona kutariswa. Uye zvakare, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti inodzivirira terminal G haina kubatana kune inodzivirirwa, asi yakabatana kune insulator pakati peL neE, kana mune tambo tambo tambo, kwete kune dzimwe tambo dziri kuyedzwa.
3. Sei zvichidikanwa kuyera kwete chete yakachena kuramba, asi zvakare chiyero chekutora uye polarization index kana uchiyera kuputira?
PI ndiyo indekisi yekuparadzanisa, iyo inoreva kuenzanisa kwekudzivirira kwekuputira mumaminetsi gumi uye 1 miniti panguva yekuyedza bvunzo.
DAR ndiyo dielectric absorption ratio, iyo inoreva kuenzanisa pakati pekudzivirira kwekudzivirira muminiti imwe uye kuti muma15s;
Mukuyera kwekusimbisa, iko kwekudzivirira kwekudzivirira kukosha pane imwe nguva hakugone kunyatso kuratidza hunhu hweyakagadziriswa kuita kwechinhu chekuyedza. Izvi zvinokonzerwa nezvikonzero zviviri zvinotevera: kune rimwe divi, kupokana kwekudzivirira kwechero kuita kwekusimbisa zvinhu zvidiki kana vhoriyamu iri hombe, uye yakakura kana vhoriyamu iri diki. Kune rimwe divi, kune kuchaja kwekutora uye kugadzikana kwemaitiro ekudzivirira zvinhu kana yakakwira voltage inoshandiswa. Naizvozvo, iyo sisitimu yemagetsi inoda kuti chiyero chekumwa (r60s kusvika r15s) uye polarization index (r10min kusvika r1min) inofanirwa kuyerwa muyedzo yekuvhara ye main transformer, tambo, mota uye dzimwe nguva zhinji, uye mamiriro ekuputira anogona kutongwa ne iyi data.
4. Nei mabhatiri akati wandei emagetsi ekudzivirira kuramba tester achiburitsa yakakwira DC magetsi? Izvi zvinoenderana nemutemo we DC kushandurwa. Mushure mekusimudzira wedunhu kugadzirisa, yakaderera magetsi magetsi inokwidziridzwa kune yakakwira kuburitsa DC voltage. Kunyangwe iyo inogadzirwa yakakwira voltage iri pamusoro, iyo yekubuda simba iri diki (yakaderera simba uye diki razvino).
Ongorora: kunyangwe kana iro simba riri diki kwazvo, hazvikurudzirwe kubata iyo bvunzo yekuongorora, kucharamba kuine kurira.
Copyright © 2021 Shenzhen Meiruike Electronic Technology Co, Ltd. Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, Dhijitari Yakakwira Voltage Meter, Yakakwira Voltage Calibration Meter, Yakakwira Voltage Meter, 1000v- 40kv Dhijitari Meter, Yakakwira-Voltage Dhijitari Meter, Voltage Meter, Zvese Zvigadzirwa